Madaxweyne Xaaf oo aqbalay baaqii Farmaajo kuna wajahan Muqdisho – Radio Daljir
Nofeembar 1, 2018 11:33 b 0
Sida ay idaacada Daljir uxaqiijiyo Ilo xogo gaal ah oo ka tirsan Madaxtooyada Galmudug ,ayaa waxaa la sheegay in lagu guulaystay in Madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geel Xaaf in lagu qan ciyay ka qaybgalka shirkii uu dhawaan ku baaqay Madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdilaahi Farmaajo.
Madaxweyne Xaaf ayaa la sheegay in uu aqbalay tagitaanka shirka Muqdisho , waxayna arintan ay timid kadib markii xalay ilaa iyo saaka kulamo albaabada ay uxirnaayeen uu la qaatay Madaxa xukuumadda Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir Cali.
Sheekh shaakir ayaa sheegay in dhankiisa uu ka qayb galayo shirka uu iclaamiyay Madaxweynaha .
Wakiilada Qaramada Midoobay iyo Midowga Afrika ee Arrimaha Soomaaliya Amb. Nicholas Haysom iyo Francisco Madiera ayaa magaalooyinka Kismaayo iyo Baydhabo kula kulmay Madaxweynaha mamauladaasi , waxayna ka dhaadhiciyeen in ay yimaadaan shirka Muqdisho oo uu iclaamiyay Madaxweyanaha.
Lama oga go,aanka ay qaadan doonaan dhankooda Madaxweyne yaasha Puntland , Koonfur Galbeed iyo Jubaland ku waas oo ay isku xuluufo ahaa yeen Madaxweyne Xaaf .
Wacaal daray ah: Afhayeenkii Nabadoonada gobolka Bari oo Bosaaso lagu xiray